Madaxweynaha Jubbaland oo safar ku aaday Ethiopia – Radio Daljir
Madaxweynaha Jubbaland oo safar ku aaday Ethiopia
Juunyo 16, 2013 5:21 b 0
Kismaayo, June 16,2013, Madaxweynaha Dawlad goboleedka Jubbaland Md Axmed Maxamed Islaan ( Axmed Madoobe) iyo wafti uu hogaaminayo ayaa maanta u anba baxay dalka Ethiopia.
Waftiga Md Axmed Madoobe ayaa la filayaa inay tagaan magaalada Adis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia iyagoo la kulmi doona madaxda ugu saraysa ee dalka Ethiopia iyagoo kala hadli doona arimaha maamulka Jubbaland iyo sidii xiriirka wada shaqayneed ee Dawlad goboleedka Jubbaland iyo dalka Ethiopia oo deris ah.
Sidoo kale Waftiga Jubbaland ayaa tegi doona magaalada Jigjiga oo caasimad u ah Dawlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyagoo kala hadli doona sidii labada deegaan ay uga wada shaqayn lahaayeen adkaynta nabadgelyada ee xuduudahooda iyo sidoo kale is dhexglaka ganacsiga iyo horumarka labada bulsho.
Ugu danbayn waftiga Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa la filayaa inay socdaal ku tagaan deegaanada Puntland halkaasoo ay kula kulmi doonaan madaxda Dawlada Puntland iyo waxgradka deegaanadaasi oo ay isla soo qaadi doonaan xoojinta nidaamka Federalka ah ee Soomaaliya iyo adkaynta isku xirnaanshaha labada dhinac.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa socdaalkani noqonayaa kii labaad oo uu dalka dibada uga baxo mudadii uu xilka Jubbaland hayey waxaana socdaalkan lagu sheegay mid lagu horumarinayo Dawlad goboleedka Jubbaland xiriirkiisa caalamiga ah.
Sheeko Gaaban: qaybtii 2’aad ee sheekadii Ismadhaanto (Dhegayso)
Baahin: Sabti, June 15 2013, Caawa Iyo Daljir Weriye Cabdirisaaq C Cabdi Silver ~ Daljir ~ Galkacyo